Kufamba kwaApple kwazvino kunoita sekusimbisa kuongorora kweglucose paApple Watch | Ndinobva mac
Kufamba kwaApple kwazvino kunoita sekusimbisa kuongorora kweglucose paApple Watch
Isu tanga tiri makuhwa kwenguva refu nezve mashandiro matsva ayo anotevera Apple Watch aigona kusanganisira. Tiri kutaura nezveglucose monitor. Nemashoko ari pamusoro apa zvaiita sezviri pachena kuti makuhwa acho aive akakomba. Kwete chete zvinoitwa nemakambani echitatu, kana zvisiri zveApple zvinofambisa. Muchokwadi chiito chekupedzisira chawatora zvinoita sekusimbisa kuti tichava nemamita nyowani pawatch.
Takataura kakawanda nezve kugona kweApple Watch kushanda sechiremba akazvimirira. Kunze kwekunge iyo isingakwanise kupora, inoita zvinhu zvakawanda zvinobatsira kune hutano hwedu. Zvinotitadzisa kumatambudziko emwoyo, zvinotibatsira kana pakaita kudonha, tinochengetedza hutsanana hwemaoko ... nezvimwewo. Chinhu chinotevera icho Apple inoda kutibatsira kutonga edu glucose mazinga uye zvinoita kunge zvakakomba kwazvo.
Kwete chete nekuda kwenhau izvo vakatouya kumberi pamusoro peiyi tekinoroji nyowani, kana zvisiri nekuti isu tinofanirwa kufunga izvo izvo izvo Apple yakatanga kuongorora pakati pevashandisi Apple Watch uye akavabvunza kana vakashandisa chero chirongwa kuteedzera maitiro avo ekudya, mishonga, uye mwero wehuga yeropa.
Mufananidzo weongororo yakagovaniswa ne9to5Mac nemuverengi weBrazil, uyo akaigamuchira muemail yake. Ongororo iyi ine chikamu chakatsaurirwa hutano hunhu, ayo ave akakurisa nzvimbo yekutengesa yeApple Watch kubvira payakatanga.
Ichitevera iyi mibvunzo, Apple zvakare inobvunza mibvunzo nezve vechitatu-bato kunyorera kugadzirisa data rehutano. Ongororo iyi inopa sarudzo pakushandisa kwechitatu-bato kunyorera kwekuteedzera mashandiro, kutevedzera tsika dzekudya (kusanganisira hydration uye kudya kunovaka muviri), uye kugadzirisa kumwe kutarisirwa kwehutano (senge mishonga uye kuwongorora mazinga esimba) .Ropa glucose).
Isu tinoziva kuti idzi ongororo dzakashandira kambani pazviitiko zvakapfuura zvekutora sarudzo. Semuenzaniso mukubviswa kwejaja mune iyo nyowani iPhone 12 uye zvimwe zvishandiso. Saka tinogona kutaura kuti ichi sosi yakanaka kwazvo uye kuti ndizvo kupfuura zvingangoita kuti isu tine iyo mita yeglucose paApple Watch 7. Chatisingazive ndechekuti chichava software kana Hardware yekuvandudza. Ndinovimba ichave yekutanga uye saka isu tese tinogona zvakare kubatsirwa nazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kufamba kwaApple kwazvino kunoita sekusimbisa kuongorora kweglucose paApple Watch
Inotevera MacBook Air, mune akasiyana mavara senge iMac nyowani